Maamulka gobolka Banaadir oo tababar u soo xiray shaqaale dab damiska la baray – Radio Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir oo tababar u soo xiray shaqaale dab damiska la baray
Munaasabad shahaadoyin lagu doon siiyay koox dabdamis ah oo muda bil ah lagu atababaraaye xarunta dabdamisda Degmada boondheere ee gobalka banaadir iyadoo munaasabada ay kasoo qeyb galay Kusimaha Gudoomiyaha gobalka abnaadir masuuliyin kala duwan iyo marti sharaf kale.
Kooxda Tababarka loo soo xiray ee shahaadooyinka lagudoon siiyay ayaa loo tababaray Gurmadka degdega ah ee dabdamiska iyagoo loo tababaray in ay ka howl galaan Degmada cabudwaaq ee gobalka galgaduud.
Masuuliyiinti kasoo qeyb gashay munaasada ayaa ku booriyay maamulka dabdamiska in la Xoojiyo Tababarada loo sameynaaya gobalada dalka si ay ugu faa’ideystaan Gurmadka deg dega ah.
Gudoomiyaha Degmada Boondheere Qaasim cabdulaahi xasan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobalka looga baahan yahay in ay ilgaar ah ku haayan waaxda Dabdamiska.
“In Xarunta dabdamiska ee gobalka banaadir ee iyada degmada boon dheere kutaala maxaa yeelay waa waxda kaliya ee aan dhihi karno ugu shaqada badan uaguna firfircoon afar iyo labataan sacna shaqeeya.
Kusimaha Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Gudoomiye kuxigeenka siyaasada ee maamulka banaadir Maxamed Amed Diiriye ayaa dhankiisa Tilmaamay in dhalinyarada Tababarka loo soo xiray marka ay Tagaan gobalka kooda ay si hagar la’aan ah ugu u adeegan bulshada.
Kooxaha Dabdamiska Soomaliyed ayaa horey waxaa loogu soo tababari jiray Dalka dibadiisa iyadoo Talaabadan ah in gudaha dalka lagu tababaro dabdamiska Soomalaiyed ay dhiira galineyso in la balaariyo Tayada Gurmadka degdega ah ee dabdamiska.